40 CV-yada Asalka ah ee cajiibka ah si loo soo Dejiyo | Abuurista khadka tooska ah
Manhajka Vitae ee naqshadeeye qaabeed wuxuu noqon karaa mid aad u xiiso badan xaqiiqda dhabta ah ee laga hadlayo sidaan nahay ama waxa aan awood u leenahay inaan qabano, uma baahnin inaan u adeegsano erayga qoran gaadiid ahaan, runti naqshadeynta dib u bilaabashadeena lafteedu waxay ka badnaan kartaa tixraac waxayna ku siin kartaa tilmaamo badan nooca nooca nashqadeeyayaasha iyo shaqaalaha aan runti nahay . Sidaa awgeed muhiimadda ay leedahay CV-yada asalka ah si loo soo jiito dareenka.
Runtu waxay tahay in inteena badan oo inaga mid ah oo u heellan qaybta ugu hal abuurka badan (haddii aan nahay nashqadeeyayaal, abuurayaal nuxur leh, qorayaal ama farshaxanno muuqaal ah) waxaan jeclaan lahayn inaan awoodno u isticmaal resumeygeena sida «shiraac», maxaa yeelay shaki la'aan waxaan hubnaa inay tani runti tahay tayada manhajka qoraalka Asal ahaan wuxuu noqon lahaa mid sax ah oo sax ah, laga yaabee inuu ka badan yahay magaca xarunta aan wax ku baranno ama xitaa shirkadaha aan u shaqeyno.
Mararka qaarkood waxaan ka hadalnay naqshadeynta nafteena, wax aan si isku mid ah u qabaneyno qaabeynta xirfadeena xirfadeed. Qaab-dhismeedkan bini-aadamnimada ama naqshadeynta shaqada waa inuu ku sameeyaa waxyaabo badan. Qaabkeena marka ay timaado shaqeynta, u janjeedha waa inaan doorano midab gaar ah oo shaqooyinkeena ah, awoodahaaga, fikradahaaga, iyo resumeygaaga iyo waliba faylalkaaga. Xalka ugu habboon ee lagu horumarinayo naqshad wanaagsan oo sidoo kale dhab ah, ayaa ah in dhammaan doorsoomayaashaan ay isku raacaan oo ay is milicsadaan. Waxaan dooran doonnaa qiyaasta hal-abuurnimada ama qaabkeenna gaarka ah ee aan dooneyno inaan ku dhigno manhajkeenna asalka ah iyo sidaas darteed intee in le'eg ama ka yar oo geesinimo leh iyo qatar u noqon doonnaa. Waxaan dhihi karaa khatar sababtoo ah runtii waa inaan sidoo kale barannaa inaan noqono saadaaliyayaal wanaagsan xaaladaha qaarkood iyo gaar ahaan wada-hadallada qaarkood. Si kasta oo ay u muuqato wax la yaab leh, shirkado badan ayaa raadinaya qof buuxiya booska booska hal-abuurka oo dalbanaya aragti ugu badnaan ayaa diida noocan CV-ga asalka ah. Ma waxaa jiri doona macno darro ka weyn adduunkan? Xaqiiqdii haa, laakiin maaha wax badan oo ka baxsan.
Runtu waxay tahay haddii aan u istaagno inaan si taxaddar leh u falanqeyno, habdhaqanka noocan ah wuxuu leeyahay sharraxaaddiisa iyo doodo macquul ah oo macquul ah. Marka ugu horeysa, waa inaan maanka ku haynaa in qofka qaata uusan had iyo jeer u baahnaan doonin xirfadlaha ugu fiican ee aan sharaxaad ka bixiyo. Maaddaama aad u baahan tahay inaad haysato xirfadlaha ugu fiican, waad u baahan tahay, laakiin guud ahaan inta badan kiisaska ma awoodid. Waxaan dhihi karaa inta badan kiisaska maxaa yeelay waxaa jira inta badan SMEs iyo shirkado dhexdhexaad ah, sidaa darteed haddii aad go'aansato inaad u dirto shaqo farshaxan halkii resume shirkad kasta oo yar ama mid dhexdhexaad ah, waxay u badan tahay in kuwa mas'uulka ka ah xuquuqda Aadanaha "ay baqaan. "una maleynayaa inayan awoodin inay bixiyaan waxa aad u qalanto (wanaagsan, tan had iyo jeer waxay ahaan doontaa kiiska laakiin haa taasi waa arrin kale). Sidaas xal abuur iyo qabow sida mararka qaarkood waxay noqon karaan kuwo aan faa'iido lahayn. Xaaladaha noocan ah, ee noqon doona kuwa ugu badan, waa inaad doorataa xalal badan oo heer sare ah, oo aan qasab ahayn inay dhexdhexaad noqdaan iyo inaan halkan u joogo inaan kaala hadlo noocyada xalalka maanta maxaa yeelay iyagu waa kuwa ugu waxtarka badan waxqabadka ujeeddooyinka.
1 CV-yada asalka ah ee ugu wanaagsan ee lasoo dejiyo
1.1 Dib u bilaw xiruxiru
1.2 Resi Resume waxaa qoray Rei-pash
1.3 Ku bilow zxcxvxc
1.4 Ku soo celi brazilnut
1.5 Resume Qaaciddada mac1388
1.6 Dib-u-cusbooneysiintaydii ugu dambaysay ee pixelprop
1.7 Resumeeyga by darthkix
1.8 Dib ugu cusbooneysii dhabanka dhabanka
1.9 Dib u bilaw KevinPire
1.10 Dib u bilaw Kyuzengi
1.11 Dib u bilow by heydani
1.12 Dib u cusbooneysiinta mac1388
1.13 Dib u cusbooneysiiyay labalapdesigns
1.15 Ku bilow Akashrine
1.16 Dib u bilow Espanol by rogaziano
1.17 Dib ugu cusbooneysiiya bdechantal
1.18 Dib-u-dhigista Manhajka by toromuco
1.19 Dib ugu noqo puziah
1.20 Resume Shakhsiyeed 2010 by heeeeman
1.21 Dib u bilow WIP by AchisutoShinzo
1.22 Dib u bilaw ILICarrieDoll
1.23 Resume Server oo ay soo saartay rkaponm
1.24 Resumeeyga by Littlearashi
1.25 Ku soo noqo LordGabsta
1.26 Dib ugu cusbooneysii spen
1.27 Dhalashada Resumeeyga by NoviceXyooj
1.28 Dib ugu cusbooneysii tenbiscuits
1.29 Qeybtii Koowaad ee Abuurista Hal abuurka by NikonD50
1.30 Resume-kii hore ee naqshadeeye ee ExtremeJuvenile
1.31 Vitae Manhajka by arbrenoir
1.32 Resumeeyga cusub anigoo live2prove
1.34 Waxaa cusbooneysiiyay CV-ga xchingx
1.35 CV waxaa qoray Giemax
1.36 CV waxaa qoray Johnnywall
1.37 Resume-kayga Hal-abuurka ah by liagiannjezreel
1.38 Manhajka waxbarashadayda ee flaterie
1.39 CV Tudor Deleanu oo uu qoray iTudor
1.40 Adam Balazy CV ee Balazy
CV-yada asalka ah ee ugu wanaagsan ee lasoo dejiyo
Hoos waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaago xulashada wax intaa ka badan iyo wax aan ka yaraynba 40 tusaalooyinka cv asalka ah in aan la qabsan karno waxkastoo muuqaalkeena uu yahay. In kasta oo qaar ka mid ahi ay khatar badan yihiin, haddana marwalba waad u adeegsan kartaa dhiirrigelin iyo inaad ku darto qaar ka mid ah astaamahooda CV-gaagii hore:
Resumeey by xiruxiru
Midhaha ayaa halkan ku yeelanaya macno gaar ah waxayna siinayaan asal ahaan, ugubnimo iyo ku dhowaad dhalinyaro soo jeedintan xiisaha leh ee manhajka asalka ah ee manhajka
Resi Resume by Rei-pash
Tusaalahan, gidaarka gidaarka waxaa loo adeegsadaa inuu yahay kheyraad si loo siiyo taabasho xarrago iyo hal-abuur ku habboon.
Resumeey by zxxxxcc
Rinjiga rinjiga ayaa laga yaabaa inuu yahay mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee xorriyadda hal-abuurka.
Resumeey by brazilnut
Tusaalahani wuxuu muujinayaa qaab dhismeed adeegsanaya laymanka iyo astaanta si aad u wanaagsan.
Resume Qaab-dhismeedka by mac1388
Ku ciyaarida xarfaha iyo farta ayaa sidoo kale bixin kara natiijooyin aad u wanaagsan.
Dib-u-cusboonaysiintii ugu dambeysay by pixelprop
Sawir naxdin leh sida soo-jeedin dib-u-soo-celin ah. Cajiib!
Resumeeyga by darthkix
Soo koobitaan jaantus ah oo leh shaashadda jilaaga iyo astaamo sharaxaad leh.
Resumeey by dhabanka
Soo jeedin aad u soo jiidasho leh oo leh nuyuusyo farshaxanno farshaxan ah iyo malaha qaab dib u socod
Resumeey by KevinPire
Mararka qaarkood sameynta isku-dhafnaan wanaagsan oo midabbo iyo qaabab ah ayaa in ka badan intii ku filan.
Resumeey by Kyuzengi
Degganaansho la'aanta khadadka ayaa bixin karta natiijo soo jiidasho leh sida tusaalahan ku jirta.
Resumeey by heydani
Waxaan sidoo kale adeegsan karnaa adeegsiga shaashaddaha oo ay weheliyaan xarfaha iyo sinnaan la'aantu waxay keeni karaan natiijooyin wanaagsan.
Dib u cusbooneysiinta by mac1388
Dhammaan macluumaadka waxay ku urursan yihiin koox xarfo ah, indho indheyn ayaan ku heli karnaa dhammaan macluumaadka.
Dib u cusbooneysiiyay by labalabeegyada
Halkan waxaa ah tusaale wanaagsan oo midabada, silhouettes, qaabdhismeedka aan dheelitirka ahayn iyo xarfaha si wanaagsan loogu qasay.
icART ayaa soo koobaya by icasialnrdy
Oo ay ku jiraan sawirro wanaagsan ayaa ku dari kara taabashada casriga ah dib-u-soo-celintayaga, gaar ahaan haddii ay tahay sawirro si fiican noo metelaya.
Resumeey by Akashrine
Xayawaanka rabaayaduhu mararka qaarkood waxay ka tarjumi karaan qayb shaqsiyadeed oo dabeecadeena ah. Tusaalahan waxaan ku ciyaareynaa silhouette dabagaale.
Dib u bilow Isbaanish by rogazian
Isku darida midabada maahan in loo yareeyo walxaha qurxinta, waxaan sidoo kale abuuri karnaa isku dhaf weyn oo u dhexeeya qoraalka, sawirada iyo qaababka.
Resumeey by xarago
Mararka qaarkood waxaan u adeegsan karnaa xalal qadiimiga ah ama miyir-qab leh laakiin sababtaas darteed maahan xalka hal-abuurka yar.
Dib u bilaabista Manhajka by toromuco
Waxaan ku soo dari karnaa sawirro yar yar una adeegsan karnaa inaan kula ciyaarno ereyada ereyga.
Resumeey by puziah
Shaashadda, qaabdhismeedka iyo sawirradu si aad u wanaagsan ayey u shaqeyn karaan haddii aan ku dhex dari karno sawir shakhsiyeed oo wacan.
Resume shaqsiyeed 2010 by heeeman
Infograafiggu wuxuu si fiican u matali karaa xooggeenna iyo awooddeenna.
Soo koob WIP by AchisutoShinzo
Halkan waxaan ka helnaa khariidadda metro, joogsi kasta waxaad ka heli doontaa xogta halyeeyada.
Resumeey by ILCarrieDoll
Waxaan ku siin karnaa taabasho shaqsiyeed oo raaxo leh anagoo ku darna meelaha u dhow sida miiska shaqada.
Farta gacmeedku waxay ku siin kartaa hadal xoogaa dhow oo hal abuur badan sida tusaalahan.
Resume My by Littlearashi
Iyada oo la adeegsanayo nooca 'serif typeface' iyo cufnaanta grunge waxaan ku heli karnaa natiijo la aqbali karo.
Resumeey by Lordgabsta
Jaantusyada iyo sawiradu waxay matali karaan qaabkeenna si aad u wanaagsan, in kasta oo ay tahay inaan ogaanno sida ugu wanaagsan ee aan u dooran karno.
Resumeey by fidsan
Oo halkan waxaa ku yaal faahfaahin dheeri ah oo isku dhafan oo midabbo xiiso leh leh.
Dhalashada Resumeeyga by NoviceXyooj
Muuqaal dhanka bari ah ayaa ku siin kara natiijo farshaxanno leh dib-u-bilaabeenna.
Resumeey by buskudka
Tusaalahan waxaan ku aragnaa sida walxaha sida sawirada, xargaha, hooska iyo noocyada kala duwan ee loo adeegsaday.
Hal abuur Resume First Edition by NikonD50
Shaki la'aan mid ka mid ah xulashooyinka aan ugu jeclahay. Dib-u-habeyn radial qaabeysan oo leh cinwaano iyo sawiro fidsan.
Resume-kayga hore Xad Gudub
Habka kartuunku wuxuu bixin karaa qayb dheeri ah oo cusub iyo hawo dhalinyaro ah.
Manhajka Vitae by arbrenoir
Halkaan waxaan ka helnaa manhaj farshaxan oo aad uga faa'iideysanaya moolka dheer ee badda si uu u muujiyo xogta.
Resumeeyga cusub by ku nool2prove
Sawir leh jaantusyo goos goos ah iyo walxo qaab muuqaal ah oo fidsan.
Manhaj ku saleysan adeegsiga midabada oo ka kooban nidaamka CMYK, kuna habboon naqshadeeyayaasha garaafka.
La cusboonaysiiyay CV by xchingx
Waxyaabaha Trival ee asalka madow. Ikhtiyaar xiiso leh oo aan shaki ku jirin CV-ga asalka ah ee aan raadineyno.
Waxaan u adeegsan karnaa qaabdhismeedka wareegsan si aan ula dhexgalno walxaha toosan ee bixiya xarrago dheeraad ah.
Beddelida dareenka farta lagu soo bandhigo waxay bixin kartaa dareen dheeraad ah.
Resume-kayga Hal-abuurka ah by ligiannjezreel
Halkan waxaa ah tusaale kale oo galaya CV-yada asalka ah, oo shaqsi ahaan leh sawir iyo adeegsiga farta farta lagu qoro.
Manhajka waxbarashadayda ee flaterie
Mararka qaar xal fudud oo nadiif ah ayaa ka koobnaan kara waxyaabo hal abuur leh. Halkan tusaale.
CV Tudor Deleanu oo uu qoray iTudor
Isticmaalka midabada midabka leh ee 'Pantone' waxay noqon kartaa astaan ​​aad u guuleysata haddii aad tahay naqshadeeye garaaf ah.
Dareenka grunge, sawirada fidsan iyo jilayaasha qaab kartoon badan.
Maxaad u maleyneysaa xulitaankan kan ugu fiican CV asalka ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » CV asalka ah
aad ufiican dhamaan .... waxay si aad ah uquruxiyaan aragtida
Wanaagsan wanaagsan !!! Waan ka helay iyaga !!!
Fabuleusa Inamomes by Alana iyo Sinjexa oo ay weheliso Brado Daras. riamo aramoss iyo fratuico amegimo oo leh dolulo preserves!
Ku jawaab Bridge
xagee ka heli karaa cashar aan ku sameeyo
dib u bilaabay dijo
Isku soo duub aad u fiican, waxaan helay fikrado aad u wanaagsan oo loogu talagalay qaabeynta dib u bilaabida mustaqbalka!
Ka jawaab celinta
Waxay ugu yeeraan tusaalooyin manhajkan, oo la yimid waxyaabo nacasnimo ah, waa wax laga xumaado oo lagu qoslo… .. manhajka, ha!
Jawaab Katherine Salinas Mendoza
Jooji akhriska nolosha, aqoon kororso oo maskaxdaada sii daa
Sooooo si fiican buu u yidhi. Waxaad arki kartaa in marwadan aysan aqoon u laheyn naqshadeynta oo ay leedahay fikirkeeda. Dib-u-soo-celintaas gudahood waxaa ku jira hal-abuur muhiim ah iyo hawl socodsiinta runta oo leh aniga ma jecli sidan oo aan u idhaahdo waxay ka timid qof jaahil ah oo aan bislaan. Salaan!
ma garanaysid saaxiib, waa inaad noqotaa qareen xisaabiye ama wax miiska ka socda maxaa yeelay ma ogid
Jawaab juan p
Katherine, dhaqankaaga garaafka ah, hal-abuurka iyo sirdoonka ayaa muujinaya wax badan.
Manhajka jamac ahaan waa: Manhaj.
Zeta-ka nacasnimada ayaa si muuqata u muuqda maqnaanshihiisa.
Qosolka ... adigaa iska leh.
Rogelio Cuervo Zarate Caddaan dijo
Aniguba isku fikir baan ahay.
Jawaab Rogelio Cuervo Zarate Blanco
Waxaa la ogsoon yahay inuusan waxba ka ogeyn aqoonsiga hal abuurka iyo sirdoonka ...
Waxay ila tahay aniga oo soo gabagabeynaya in Katherine aysan caqli badneyn, jaahil ah oo aan qaan gaarin faallooyinkeeda ay muujineyso biseyl yar ...
Dib-u-soo-celintaani waa mid aad u cusub, laakiin qaar badan oo ka mid ah si dhib yar ayaa loo akhrin karaa. Waxaan arkay dib-u-cusboonaysiin badan oo casri ah oo qaabeysan oo si fiican loo akhrin karo. Ma aqaan sida hawsha xulashadu u tahay adduunkaaga, laakiin sidaad ugu dirto resumeygaaga shirkad aan si gaar ah u naqshadeyn iyo qorista HR. la mid ahaw qaybaha kale ee shirkadda (xoghaynta, maaraynta, geeddi-socodka, injineerada, ...) kalabar CV-yadaas fursad ma lahan, maxaa yeelay shaqaalaysiiyaha ayaan waqti ku lumin doonin sifeynta macluumaadka.
Markay halkaas ka sheegaan, aad bay u raaxaystaan, laakiin way fiican yihiin inay derbiga ku dhegaan, oo ayan ahayn inay gudaha wax ka akhriyaan.
Ugu yaraan 30% tusaalooyinka sifiican ayaa loo qabtay… inta hartay wali waa cagaar.
Jawaab Yuri Luis Medina Barrios
waxaa jira qaar aan haba yaraatee jirin .. Waxaan la qabaa fikirka Luis Medina
Jawaab Luis A.
Dib-u-soo-kicinta firfircoon waxay u muuqdaan kuwo xiiso leh. Ku fiican hal-abuure iyo naqshadeeye… in kastoo, aan arkay qaar ka mid ah shirkadaha "halista ah" oo ka cadhooday CV-yadan cusub.
Jawaab Handz Valentin
genials !!!! Way i dhiirrigeliyaan
Jawaab Silvia Vera Laceiras
CV-yada waxay noqon karaan sida asalka ah ee aad rabto, runti, dhammaantood waxay khalkhaliyaan shaqooyin badan oo naqshadeyn ah iyo saacado badan oo shaqo ah, laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay inaanan ilaawin cida aan udireyno (Kheyraadka Shaqaalaha ee shirkadaha, oo aakhirka kuwa xulaya, wareysanaya iyo kireysanaya ama aan ahayn) iyo macluumaadka aan gudbino. Sawirka sumadda laguma gaari karo oo keliya naqshad wanaagsan, sidoo kale waa inaad bixisaa farriin tayo leh. Dhamaan waad salaaman tihiin
Waxaan u maleynayaa in dhowr dib-u-soo-celin oo loogu talagalay aysan soo saarin khatarta ay tahay inay bixiyaan, qaar xitaa waxay u eg yihiin boorarka ama wax la mid ah.
CV-yada ayaa ah mahadnaq aad u salaan diiran
Ku jawaab lanyuan